अस्पतालले ‘मरिसक्याे’ भनिएका बिरामी निको भएर घर फिर्ता ! – Sandesh Munch
अस्पतालले ‘मरिसक्याे’ भनिएका बिरामी निको भएर घर फिर्ता !
July 8, 2020 132
चितवन, २४ असार । उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भनिएका व्यक्ति मङ्गलबार निको भएर घर फर्किएका छन् । स्थानीय चितवन मेडिकल कलेजले उपचारमा लापरवाही गरी ती व्यक्तिको मृत्यु भएको भनी आफन्तले कलेज तोडफोड गरेका थिए ।
भरतपुर महानगरपालिका–२२ का १८ वर्षीय आशीष विक निको भएपछि मङ्गलबार अस्पतालबाट घर फर्किनुभएको छ । एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गरेका विकलाई समस्या देखिएपछि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो । सोही समयमा निजको मृत्यु भयो भन्ने हल्ला भएसँगै उनका आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड गरेका थिए । तोडफोडबाट अस्पतालको सघन उपचारकक्षको झ्यालका सिसा फुटेका थिए । तोडफोड गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अस्पतालले उपचारमा कहिल्यै लापरवाही नगर्ने भन्दै उहाँले अनावश्यक मानिसहरु भीड भएर तोडफोड र गालीगलौजमा उत्रँदा काम गर्नेहरुको मनोबल उच्च बनाउन कठिन हुने बताउनुभयो । -रासस
Prevचान्द्रमासअनुसार असार २२ गते सोमबारदेखि श्रावण कृष्णपक्ष शुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष साउन महिनामा पशुपति क्षेत्रमा लाखौँ भक्तजनको भीड लाग्ने गर्छ।
Nextटिपरको ठक्करबाट एक व्यक्तिको मृत्यु
अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई १५० प्रतिशत भत्ता
‘नक्सा सार्वजनिक गर्न स्वतन्त्र छौं, वार्ता हुन्छ भनेर रोकिएको हो’